संस्कृति सदक को अवस्था – Vocre
संस्कृति सदक को अवस्था
नयाँ देशमा संस्कृतिमा आघात एक सामान्य प्रकारको विचलन हो, नयाँ घर, वा नयाँ सांस्कृतिक सेटिंग. यो एक होस्ट संस्कृति चिन्ने जबकि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र आप्रवासीहरूको लागि धेरै सामान्य छ.
जबकि केहि सांस्कृतिक आघात केही अपरिहार्य छ, यस घटनाले तपाईंको नयाँ घरमा तपाईंको अनुभवमा पार्ने प्रभावलाई कम गर्ने तरिकाहरू छन्.
5 संस्कृति सदक को अवस्था
संस्कृति सदमेका पाँच विभिन्न चरणहरू हनीमून हुन्, निराशा, समायोजन, स्वीकृति, and re-entry.
संस्कृति सदमेको पहिलो चरण सुरुमा 'हनिमून' चरण हो. यो हो (क्रमबद्ध) संस्कृति आघातको उत्तम चरण किनभने तपाईंले सायद कुनै पनि 'नकारात्मक' प्रभावहरू महसुस गरिरहनु भएको छैन.
जब तपाईं हनिमून अवधिमा हुनुहुन्छ, तपाइँ सामान्यतया तपाइँको नयाँ वरिपरिको बारे सबै कुरा मन पराउनुहुन्छ. तपाईं आफ्नो जिज्ञासा अँगाल्दै हुनुहुन्छ, तपाईंको नयाँ देशको अन्वेषण गर्दै, र अधिक को लागी तयार छ.
अझै, यो अक्सर हनीमून चरणको 'अत्यधिक' हुन सक्दछ जुन संस्कृति आघातका नकारात्मक प्रभावहरू निम्त्याउन सक्छ. जब तपाईं सबैमा जानुहुन्छ र अर्को संस्कृतिमा आफूलाई डुबाउनुहोस्, it’s common to start feeling fatigued.
संस्कृति सदमेको पहिलो 'नकारात्मक' चरण निराशा हो. हामी सबै दिनहुँको दैनिक जीवनबाट निराश हुन्छौं, तर जब हामी नयाँ संस्कृतिमा डुबेका छौं यो निराशा अझ बढी चिन्तित तुल्याउन सक्छ.
हाम्रो घरको संस्कृतिमा, हामी अक्सर निराश हुन्छौं जब हामी सुन्नुहुन्न, कुराकानी गर्न सक्दैन, वा अदृश्य महसुस. जब हामी नयाँ संस्कृतिमा हुन्छौं तब यी निराशाहरूले अतिशयोक्तिपूर्ण महसुस गर्न सक्दछन्. न केवल हामी दैनिक कष्टप्रदहरूको सामना गरिरहेका छौं, तर हामी यी कष्टप्रदहरू सामान्य स्तरको सट्टा 'स्तर १०' मा व्यवहार गर्दैछौं.
निराशा भाषा मिसकम्युनिकेसन र सांस्कृतिक भिन्नताको माध्यमबाट एक होस्ट देशमा प्रकट हुन सक्छ.
तपाई निराश महसुस पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनकि तपाईलाई आफ्नो वरिपरिको बाटो थाहा छैन, यातायात प्रणाली संग अपरिचित छन्, र सबै समय हराउनु भएको पाउनुहोस्.
समायोजन चरणमा जब चीजहरू थोरै राम्रो हुँदै जान्छन्. You’re getting used to your new surroundings and gettingahang of local languages.
जबकि तपाईं एक स्थानीय जस्तो लाग्न सक्छ, you’re starting to get used to the differences between your way of life and your host country’s.
संस्कृति सदमेको अन्तिम चरण स्वीकृति र आत्मसात हो. यो सामान्यतया केही दिन पछि हुन्छ, हप्ता, वा आइपुगेको महिना पछि (प्राय: तपाई कति लामो समय बस्नुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ).
स्वीकार्यता तब हो जब तपाईं अन्ततः स्थानीयहरू मध्ये एक जस्तो महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ. यो प्रायः घट्दछ जब तपाईं कमसेकम आशा गर्नुहुन्छ!
तपाईं अचानक सार्वजनिक यातायात प्रणाली कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्नुहुन्छ, तपाईं चुटकुले भित्र 'प्राप्त' सुरु गर्नुहुन्छ, र भाषा संघर्ष को कम छ. नयाँ संस्कृतिमा पूर्ण रूपमा एकीकृत हुन यसले वर्षौं लिन सक्दछ, तर तपाईं सायद अझै पहिले यो चरणको भन्दा बढी सहज महसुस गर्नुहुनेछ तपाईंले पहिलेको चरणहरूमा भन्दा.
पुन: प्रवेश संस्कृति सदक
जब तपाईं आफ्नै संस्कृतिमा घर फर्कनुहुन्छ एउटा अर्को प्रकारको संस्कृति आघात हुन्छ. This isatype of reverse culture shock.
तपाईलाई आफ्नै घरको संस्कृति जस्तो लाग्न सक्छ तपाईको आफ्नो जीवनशैली अब फिट हुँदैन वा मित्र र परिवारले तपाईलाई "प्राप्त" गर्दैनन्. This is extremely common when traveling between developing and developed nations.
यसले केहि दिन लिन सक्दछ, हप्ता, वा महिना सामान्य महसुस गर्न. This common type of culture shock simply shows you that you’re not the same person you were when you left your home country.
संस्कृति सदक रोक्नको लागि सुझावहरू
यदि तपाइँ संस्कृति सदमेका बारे चिन्तित हुनुहुन्छ (वा पहिले नै यसको प्रभावहरू महसुस गरिरहेको छ), there are some ways to make your transitionalittle easier.
तपाईको नयाँ घर जानु भन्दा पहिले, भाषा सिक्न सुरु गर्नुहोस्. यद्यपि स्थानीयहरूले तपाइँको पहिलो भाषा बोल्छन्, तपाइँ संवाद गर्न मद्दत गर्न केहि शब्दहरू र वाक्यांशहरू सिक्न सुरू गर्न चाहानुहुन्छ.
केहि धेरै आधारभूत शब्द र वाक्यांशहरू सिक्न मद्दतको लागि अनुवाद अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्. Vocre जस्तै अनुप्रयोगहरू (मा उपलब्ध गुगल प्ले एन्ड्रोइड वा को लागी एप्पल स्टोर IOS को लागी) आवाज र पाठ अनुवाद प्रदान गर्नुहोस् र अफलाईन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ. You can use these types of apps to learn the language before you leave home — as well as to help you to communicate with locals.
नयाँ संस्कृतिको अपेक्षाहरू हुनु यो सामान्य छ. अझै, most of our pain and suffering comes from unhealthy expectations and our realities failing to live up to such expectations.
यदि तपाइँ पेरिसमा सर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं दिनहुँ बगुइटेस खाने आशा गर्न सक्नुहुनेछ जब चम्प्स-एलिसिससँग टहलिरहनुभयो, बोल्दै फ्रेन्च तपाईलाई भेट्ने सबैलाई. वास्तविकतामा हुँदा, तपाईंले फ्रान्सेली खानालाई घृणा गर्नुहुन्छ भन्ने फेला पार्नुभयो, स्थानीयसँग कुराकानी गर्न सक्दैन, and get lost on the Metro at every turn.
नयाँ देशमा जानु भन्दा पहिले अपेक्षाहरू छोड्नु महत्त्वपूर्ण छ. संस्कृति र वास्तविकता को विचार अक्सर दुई पूर्ण भिन्न अनुभव हो.
स्थानीय एक्सप्याट समूहहरूमा सम्मिलित हुनुहोस्
धेरै कारणहरूले आफूलाई एक्लोपनमा भेट्टाउनुको एक कारण यो हो कि यो अनौंठो भूमिमा अपरिचित हुन कस्तो महसुस हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छ - जबसम्म तपाईं आफैले यो काम गर्नुहुन्न।. धेरै स्थानीय मानिसहरूले संस्कृति सदमेका बुझ्दैनन् किनकि उनीहरूले कहिल्यै फरक संस्कृतिमा डुबाउने अनुभव गरेका छैनन्.
एउटा क्रु पत्ता लगाउने एउटा तरिका जुन तपाईंको हताशा बुझ्दछ त्यो एक पूर्व-प्याट समूहमा सामेल हुनु हो. यी समूहहरु संसारभरि र अन्य संस्कृतिहरु को पूर्व pats बाट बनेको छ, त्यसोभए तपाईं केहि साथीहरू भेट्टाउनुहुनेछ जुन तपाईंलाई घरको सम्झना गराउँदछ.
घरका अनुस्मारकहरूलाई अँगाल्नुहोस्
यदि तपाईं सँधै अर्को देशमा सर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं अझै पनी कुनै फरक संस्कृतिमा सजीलो चाहानुहुन्छ. आफूसँगै घरका केही रिमाइन्डरहरू ल्याउन नबिर्सनुहोस्.
जबकि नयाँ खाद्य पदार्थ पत्ता लगाउन सधैं रमाईलो छ, तपाईं अझै पनी खानाको मजा लिन चाहानुहुन्छ जुन तपाईंलाई घरको सम्झना गराउँदछ. तपाईंको आफ्नै संस्कृतिबाट खाना बनाउन सामग्रीहरूको खोजी गर्नुहोस्. तपाइँको नयाँ साथीहरु लाई तपाइँको आफ्नै संस्कृति को परम्परा परिचय. साथीहरू र परिवारलाई घर कल गर्न नबिर्सनुहोस्.
संस्कृति झटका व्यवहार गर्न सधैं सजिलो हुँदैन, र यो सामान्यतया केही अपरिहार्य हुन्छ. भाग्यवश, संक्रमणलाई अलि सजिलो बनाउन त्यहाँ तरिकाहरू छन्.